Mampahafantatra Ny Fampiharana Wikimedia Commons Ofisialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2013 14:41 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Aymara, 日本語, বাংলা, English
Fanamarihan'ny Rising Voices: Navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy Wikimedia ity lahatsoratra nosoratan'i Maryana Pinchuk ity ary navoaka tamin'ny alalan'ny CC BY 3.0 license.
Tia maka sary amin'ny smartphone ianao? Ankehitriny, tsy mila miandry tonga any an-trano ianao vao afaka hampakatra ny sarinao fianarana avo lenta amin'ny Wikimedia Commons, fandraketan-tsary maimai-poana fampiasan'ny Wikipedia sy ireo tetikasa maro hafa.
Ny fampiharana Wikimedia Commons ofisialy amin'ny iOS sy Android dia ahafahanao mampakatra haingana sy mora ny sarinao mankamin'ny Commons. Afaka mampakatra rakitsoratra marobe ianao sy manisy sokajy (Android ihany aloha hatramin'izao) ary mizara izay sary nampakarinao amin'ny habaka fizarana sary tianao indrindra. Manampy amin'ny fampahafantarana ny encyclopedia midadasika indrindra manerantany ny fandraisanao anjara amin'ny Commons ary manome fahalalana eo amin'ny fiainana ho an'ireo mpiserasera an-tapitrasany manerantany.
Efijery fidirana ao amin'ny fampiharana Commons amin'ny Android / Ny “ireo sary nampakariko” ao amin'ny fampiharana Commons amin'ny iOS.
Rahatrizay, manantena izahay fa hanampy tolotra bebe kokoa ary hanamora izany amin'ny famakivakiana sy fijerena ireo votoaty goavana atolotry ny Commons. Manantena ihany koa izahay fa afa-manatanteraka fanentanana bebe kokoa tahaka ny Wiki Loves Monuments, mandrisika ireo manampahaizana mpampiasa ny Commons sy ireo olom-baovao amin'ny tetikasa Wikimedia mba hitondra ny anjara birikiny amin'ireo filàna lehibe amin'ny tontolon'ny votoaty.
Araka ny mahazatra, mila ny fanampianao sy ny fanohananao izahay mba hanatanterahana izany fampiharana izany amin'ny tsaratsara kokoa. Ampiasao ny fampiharana amin'ny fanandramana fitarihana ary ampahafantaro anay raha sendra mahita zavatra tsy mety ianao na raha manana hevitra tsara amin'ny tolotra tokony tovonanay amin'ny manaraka.
Ary raha tsy manana fitaovana iOS na Android ianao, aza kivy! Mampiakara amin'ny Commons fa maro ny fitetezana sy finday zakany atao amin'ny kinovam-pinday an'ny tetikasa Wikimedia.
Fanamarihan'ny Copyright: Rakitsoratra: Fampiharana Wikimedia Commons Android – Login Screen.png 01.png avy amin'ny Yuvipanda, CC-BY-SA 3.0, avy amin'ny Wikimedia Commons, iOS contribs nataon'i Brion Vibber, CC-BY-SA 3.0, avy amin'ny Wikimedia Commons